Muuri News Network » Amaro Afka gacanta ay la saarteen Milkiilayaasha Hotelada oo ka soo baxay M/Baydhabo
Amaro Afka gacanta ay la saarteen Milkiilayaasha Hotelada oo ka soo baxay M/Baydhabo
Gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo C/llaahi Cali (Watiin),ayaa amar ku aadan inaan shir uusan maamulka ka warqabin lagu qaban karin ku soo rogay Hotelada magaaladaasi.
Wuxuu sheegay gudoomiyaha magaalada Baydhabo ee maamulka K/galbeed in loo baahan yahay amarka ka soo baxay xafiiskiisa u hogaansamaan dhamaan Milkiilayaasha Hotelada Baydhabo,islamarkaana shir ka warqab la’aantooda aan lagu qaban Karin magaalada.
Gudoomiye Watiin ayaa arintaan ku micneeyay in looga gol leeyahay in lagu sugo amniga,loogana warqabo waxa ka socda magaalada Dhexdeeda.
Gudoomiyaha magaalada Baydhabo C/llahi Cali Watiin ayaa xusay in maalmihii u danbeeyay magaalada ku soo badanayeen shirarka siyaasadeed ee lagu qabanayo Hotelada iyo xarumaha kale,kuwaasi oo aan maamulka ka warqabin.
Ciidamada amaanka magalaada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa wada qorshe lagu xaqiijinayo amaanka magaaladaasi oo xarun KMG u ah maamulka K/galbeed Soomaaliya uu madaxda ka yahay Shariif Xasan Sheikh Aadan.
Lama oga arinta Xilligan ku soo beegtay in maamulka Baydhabo amar uu ku siiyo Milkiilayaasha Hotelada inaan shir iyagu ka warqabin lagu qaban Karin.